Shabaab oo ku celisay in ay sii balaarin doonto weerarrada ay ka wadaan Kenya ilaa KDF ay baxayaan – Radio Daljir
Seteembar 22, 2013 4:21 b 0
Baardheere, September 22, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarkii shalay lagu qaaday magaalada Nairobi gaar ahaan suuqa ganacsi ee Westgate Shopping mall, halkaas oo khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashay.
Afhayeenka Al-shabaab sheikh Cali dheere waxaa uu shaaca ka qaaday in ay sii socon doonaan weerarada noocaas oo kale ah, ilaa Kenya ay ciidankeeda kala baxayso gudaha dalka Soomaaliya xili sida uu hadalka u dhigay ay KDF dad badan ku laayeen gudaha dalka
Cali dheere waxaa uu intaas ku daray in weerarkan uu yahay mid ?jawaab u? ah xasuuqii ciidanka KDF ee ka tirsan AMISOM ay ka geysteen Soomaaliya dhowaan.
?Haah- way sii socon doonaan weerarada ilaa Kenya ay ciidankeeda KDF kala baxayso gudaha dalka Soomaaliya, dhibaatooyinka ay arkayaan iyo dhiiga qubanaya maanta ee ka socda Westgate iyo suuqyada la mid ah, waa ay sii socon doonaan? ayuu ku celiyey Cali Dheere.
Afhayeenka ururka Al-shabaab Cali dheere waxaa uu cadeeyey in dagaal yahanadii weerarka qaaday ay weli ku jiraan gudaha suuqa Westgate ee Nairobi, isla markaasna ay ciidamada Kenya ku dhici waayeen, sida hadalka u yiri in gudaha galaan, waxaa uu si buuxda u sheegay in ay isla xoogaggaasi sii wadi doonaan weerarada.